Xildhibaannada u tartamaya xilka afhayeenka aqalka hoose oo maanta billaabaya hadal ka jeedinta golaha shacabka – Kalfadhi
Xildhibaannada u tartamaya xilka afhayeenka aqalka hoose oo maanta billaabaya hadal ka jeedinta golaha shacabka
11 musharax oo labadii cisho ee la soo dhaafay isku diiwangeliyay u tartamida xilka afhayeenka golaha shacabka ayaa maanta iyo berito waxa ay qudbaddahooda musharaxnimo ka jeedin doonan xarunta golaha ee magaalada Muqdisho,sida uu sheegay guddiga qaban qaabada doorashada.
Musharrixiintan oo badankooda hore xilal sare uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray. 5 kamid ah musharrixiinta waxa ay ka tirsanayen golaha wasiirada ee xukuumada Soomaaliya.
Hadal jeedinta musharrixiinta oo maanta billaabaneysa ayaa ku eg maalinta berito oo ay taariikhda ku began tahay 26-ka bishan Abriil.
Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa 12-kii bishan ku dhawaaqay in uu xilkasi iska casilay kadib marun siyaasaded oo muddo seddex toddobaad soo jiitamayay.
11 Musharrax oo u taagan xilka guddoomiyenimo ee golaha shacabka Soomaaliya